Rio Ferdinand oo weerar ku qaaday ciyaartoyda kooxda Man United, kadib guuldaradii ay kala kulmeen Juventus – Gool FM
Rio Ferdinand oo weerar ku qaaday ciyaartoyda kooxda Man United, kadib guuldaradii ay kala kulmeen Juventus
Dajiye October 24, 2018
(Champions League) 24 Okt 2018. Jose Mourinho iyo wiilashiisa kooxda Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford guuldaro 1-0 kaga soo gaartay kooxda Juventus kulankoodii 3-aad tartanka Champions League.
Manchester United ayaa qaab ciyaareed liita ku soo bandhigtay kulankii ay xalay kula ciyaartay garoonkeeda Old Trafford kooxda reer Talyaani ee Juventus, taasoo ka careesiisay jamaahiirta iyo qaar ka mid ah halyeeyada Red Divalis.
Hadaba halyayga Rio Ferdinand ayaa weerar ku qaaday ciyaartoyda Manchester United, isagoo ku tilmaamay inay yihiin wiilal da’ayar ah.
“Marna ma uusan ahayn kulan dhameystiran, wuxuu ahaa kulan u dhexeeyay caruurta Old Trafford iyo kooxda Juventus”.
Jose Mourinho ayaa haatan ku wajahaya kooxda Manchester United dhibaatooyin badan, taasoo sabab buuxda u ah natiijooyinka xun ay kala kulmeen xili ciyaareedkan horyaalka Premier League iyo tartanka Champions League.
Real Madrid oo laga soo diiday racfaan ay ka qaadatay casaankii Vinicius Junior
Shaxda rasmiga ah ee Barcelona vs Inter Milan